Isafire yenkwenkwezi emnyama - i-asterism phenomenon - ividiyo
tags Inkanyezi emnyama, isafire
Ixabiso lenkanyezi emnyama ngesafire kunye nexabiso, inkwenkwezi emnyama ye-India intsingiselo.
Thenga isafire yendalo emnyama kwivenkile yethu
I-sapphire yenkwenkwezi luhlobo lwesafire olubonisa inkwenkwezi efana ne-asterism, amatye abomvu aziwa njengeerubhi zenkwenkwezi. Iisafire zeenkwenkwezi ziqulethe inaliti yokunqamleza izinto ezinje ngokubandakanywa kulwakhiwo lwekristale ebangela ukubonakala kwepateni emenyezelwe ngenkwenkwezi emithandathu xa ijongwa ngomthombo owodwa wokukhanya. Ukubandakanywa kuhlala kuyinto ye-rutile yezimbiwa, ityuwa eyakhiwe ikakhulu nge-titanium dioxide. Amatye anqunyulwa en cabochon, ngesiqhelo embindini wenkwenkwezi kufutshane nomphezulu wedome. Ngamaxesha athile, iinkwenkwezi ezikhanyisiweyo zilishumi elinambini zifunyanwa, ikakhulu ngenxa yokuba iiseti ezimbini ezahlukeneyo zokufakwa zifumaneka kwilitye elinye, njengokudityaniswa kweenaliti ezintle zerutile kunye neeplatelets ezincinci zehematite, iziphumo zokuqala kwinkwenkwezi emhlophe kunye nesibini kwiziphumo. inkwenkwezi enemibala yegolide. Ngexesha lekristali, ezi ntlobo zimbini ze-inclusions ziye zijolise ngokukhethekileyo kumacala ahlukeneyo ngaphakathi kwekristale, ngokwenjenje zenze iinkwenkwezi ezimbini ezibengezelelweyo ezibekwe phezu komnye ukuze zenze inkwenkwezi elishumi elinesibini elikhanyayo. Iinkwenkwezi ze-Misshapen okanye iinkwenkwezi ezili-12 ezikhanyisiweyo nazo zingenza njengesiphumo sokudubula. Ukufakwa kunokuvelisa iliso lekati ukuba ubuso bajonge kwicala lecabochon lijolise ngokungqinelanayo kwi-crystal c c axis endaweni yokufana nayo. Ukuba idome ijolise phakathi kwezi ndlela zimbini, kuya kubonakala inkwenkwezi esembindini, isuswe kude kwindawo ephezulu yedome.
I nkwenkwezi kaAdam yinkwenkwezi enkulu ye-sapphire ebunzima i-1404.49 carats. Isiqhamo sagxothwa kwisixeko saseRatnapura, esaseningizimu yeSri Lanka. I-Black Star yaseQueensland, eyesibili inkulu yenkwenkwezi ye-sapphire esemgangathweni kwihlabathi, inzima i-733 carats. Inkwenkwezi yaseNdiya inxweme eSri Lanka kwaye i-563.4 carats icingelwa ukuba iyinkwenkwezi yesithathu enkulu kunazo zonke, kwaye okwangoku ibonakaliswa kwiMerika Museum of History History eNew York City. I-182 carat Inkwenkwezi yaseBombay, ichitshiwe eSri Lanka kwaye ifumaneka kwiNational Museum yeMbali yeNdalo eWashington, DC, omnye umzekelo wenkwenkwezi enkulu ye-bluefire. Ixabiso leenkwenkwezi zesafire akuxhomeki kuphela kwisisindo selitye, kodwa kwakhona nombala womzimba, ukubonakala kunye nokuqina kwe-asterism.
Inkwenkwezi emnyama yaseIndiya
Rhoqo ididekile nesafire inkwenkwezi emnyama yelitye laseIndiya yinkwenkwezi emnyama diopside. Ilitye elahluke ngokupheleleyo.
I-sapayi yinqwa lokuzalwa ngoSeptemba kunye nenqaku le-45th. Ijubhi le-sapire livela emva kweminyaka eyi-65.
tags mnyama, Inkanyezi emnyama, Ingxelo IweMpathombi, Nkwenkwezi
Umbala utshintsho lwesafire
tags Tshintsha umbala, isafire
tags igolide, egolide, isafire
tags isafire, Trapiche